Cherry macaan oo huruud ah | January 2020
Waxaan ku beeri karnaa jaalaha ah jaalaha ah jardiinka beerta. Noocyada kala duwan iyo daryeelka
Ugu Weyn Ee Cherry macaan oo huruud ah
Dhammaanteen waan ognahay in cherry macaanku uu yahay berrinka cas cas ama casaan cas. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaan, waxaa jira noocyo aan caadi ahayn. Kuwaas waxaa ka mid ah geedkaas, miraha ay leeyihiin midab jaalle ah. Isla mar ahaantaana, waxay yihiin kaliya sida dhadhan fiican iyo xitaa soo jiidasho leh sababtoo ah midabkooda aan caadiga ahayn. Aynu eegno noocyada kala duwan, beeritaanka sifooyinka iyo xeerarka daryeelka ee jeeriga jaalle ah.
Sidee loo dhufto azaleas
Sidee guriga loogu kharashgareeynayaa farshaxanka orchids ee carruurta iyo xaaladahee ayuu habkani u shaqeynayaa?
Muuqaalka kalluunka jilicsan ee kaabajka ah ayaa awood u leh inuu keeno dhibaatooyin badan oo u dhexeeya labada beelood ee halbowlaha iyo aaladaha adag ee shaqadan, laakiin mararka qaarkood way adag tahay in laga takhaluso. Qoraalka soo socda ayaa loo xakameyn doonaa halganka leh boodhka jilicsan, kaas oo degay kiniinigaaga. Qeexitaanka cayayaan Cruciflora waa cayayaan magaciisa laga soo qaato dhaqanka oo inta badan quudiya, xulashada wakiillada ka soo jeeda qulqulka beeraha (kaabajka, dabeysha, kufsi) iyo dalagyada cawska (tusaale ahaan, iniin khardal ah iyo adhijirada) sayniska oo dhan. Read More
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cherry macaan oo huruud ah 2020